Loko fanadiovana tsy misy fotony ho an'ny Pharmaceutical intermediate China Manufacturer
Description:Fanadiovana tsy misy fotony ho an'ny Pharmaceutical Intermediate,Fanadiovana tsy manam-paharoa ho an'ny Pharmaceutical Intermediate,Famaranana ny vahaolana ho an'ny medicare
Home > Products > Hydrofluoroether Clean Agent > Fitaovana fanadiovana ho an&#39;ny Pharmaceutical Intermediate > Loko fanadiovana tsy misy fotony ho an&#39;ny Pharmaceutical intermediate
Vahaolana tsy misy loko sy tsy misy fanafody ho an'ny Pharmaceutical intermediate
5. Ny fanadiovana ny mpitsabo dia tsy misy poizina sy tsy mampidi-doza ary tsy manelingelina;
7. Ny ranon-tsavon'ny solon-kitodiakan'ny Hexafluoropropyl Methyl rehefa vita ny fanadiovana dia azo averina amin'ny alàlan'ny famokarana, hampihena izany fatiantoka , fandaniana ny fandaniana.
Hfe Codorless Cleanup Solution physicochemical paramètres:
Ity Hydrofluoroether ity dia fikambanana Hydrofluoroether. Ny vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana izany, izay sady tsy misy loko no sady tsy misy poizina ary tsy mampidi-doza , ary mitoka-monina. Azo ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra izy io, toy ny fanadiovana ny mari-pahaizana elektronika, ny PCB, ny fitaovana elektronika, ny fizarana mazava tsara, ny fanadiovana ny loko / lantihy samihafa, ny semiconductor, ny LCD ary sarotra disk etc., ary azo ampiasaina koa mba handotoana ary fanadiovana , fanandramana fitetezana elektronika na fitiliana fohy, ary solvent.
Ity Coatings For Industry ity dia feno 25kg / barrel, na ho an'ny fanamafisana ny mpanjifa, mora voatahiry ary
Fanadiovana tsy misy fotony ho an'ny Pharmaceutical Intermediate Fanadiovana tsy manam-paharoa ho an'ny Pharmaceutical Intermediate Famaranana ny vahaolana ho an'ny medicare